Ndị mmadụ maka Nnọkọ E-Bike Summit 2019: Iwu, eMTB Nnweta, Ọmụmụ eBiking, Inspiration, & More!
Oge nke 5 nke Ndị mmadụ maka Bikes E-Bike Summit bụ nnukwu ihe ịga nke ọma na ọnụ ọgụgụ kachasị ọnụ ọgụgụ ndị bịaranụ.
Afọ 2019 bụ afọ ọrụ maka ọtụtụ akụkụ nke igwe eletriki ya mere enwere ọtụtụ ihe ị ga-ekpuchi na ihe omume ụbọchị 1 a.
N'afọ a, emere nzukọ a n'isi ụlọ ọrụ Canyon Bicycles USA na Carlsbad, California.
Nwee akụkọ a E-Bike Summit!
Morgan Lommele (n'aka ekpe) na Larry Pizzi (n'aka nri) sitere na Ndị mmadụ maka Bikes
Morgan Lommele, Onye isi Ọchịchị & Iwu Obodo site n'aka ndị mmadụ maka igwe ojii gosipụtara na mmezu iwu e-bike kachasị ọhụrụ.
Ntinye na iwu Class Class eBike gbara okpukpu abụọ nke steeti na 2019.
Ka afọ ise gachara, steeti iri abụọ na atọ anakwerela ụgwọ e-bike maka ịgba ụgwọ nke ndị 57% kpuchie ọnụ ọgụgụ US.
Maka afọ 2020, Ndị mmadụ maka Bikes nwere ihe mgbaru ọsọ nke ịgbakwunye steeti 14 ọzọ na 23 dị ugbu a.
Steeti ndị ahụ bụ: Alabama, Alaska, Florida, Kentucky, Iowa, Louisiana, Minnesota, Missouri, Montana, North Carolina, Oregon, South Carolina, West Virginia, na Virginia.
Ndị mmadụ maka Bikes kwuru na steeti nwere iwu 3 eBike doro anya, hụla ahịa nke eBikes karịa okpukpu abụọ n'ihi na ọ na - enyere ndị na - ere ahịa aka ịkọwapụta nke ọma ebe eBik na-enweghị ike ịgbagha.
Afọ 2019 bụkwa nnukwu afọ maka micromobility na eScooters na-enweta nlebara anya dị ukwuu.
Ndị na-anya ụgbọ njem na ụlọ ọrụ eScooter chọrọ ebe dị mma ịnya ụgbọ ala, enwere mmekọrịta n'etiti igwe, eBikes, eScooters, ndị na-aga ije, wdg.
Ndị mmadụ maka Bikes na-arụkọ ọrụ na ụlọ ọrụ eScooter maka akụrụngwa kachasị mma ma na-atụkwa aro na 'ndị na-eme nha ọkụ eletrik ga-abụrịrị ndị na-eme mkpebi na mpaghara nke onwe ha, dị iche na igwe.
Nnukwu mmeri ọzọ na 2019 bụ nnabata nke eBikes na National Parks na BLM ala iji nweta ebe enwere ike ịnya anyịnya igwe.
Ndị na-ahụ maka ala ga-ekpebi klaasị eBikes na ụzọ ndị ọdịnala. Ndị mmadụ maka Bikes na-atụ aro ịkpọtụrụ ndị na-ahụ maka ala mpaghara maka mmasị gị na ịnweta igwe kwụ otu ebe ma ọ nwere ike zute ha iji gosipụta ihe ihe eBik bụ.
2019 hụkwara Bill Senate Bill 400 nke ugbu a gụnyere eBikes dị ka nhọrọ ịzụta maka Clọ Ọgwụ Dị Ọcha na California 4 Mmemme niile: 'Cgbọ Ocha Dị Ọcha 4 Ihe niile bụ mmemme na-elekwasị anya n'inye ntinye aka site na California Climate Investments na ndị ọkwọ ụgbọ ala California nwere obere ego iji kpochapụ ndị agadi, cargbọ elu na-emetọ ikuku ma were ihe nnọchi ma ọ bụ nke edochi dochie ya. '
Anyị nwekwara ike ịhụ steeti ndị ọzọ na-enye agbamume maka ịzụta eBike. Nọrọ na-ekiri.
Inyocha mkpuchi nke ụgbọ ala eletrik bụ ihe ịma aka a zụlitere n'ihi na ọ bụghị ndị na-eweta mkpuchi mkpuchi niile ga-ekpuchi eBikes.
Membersfọdụ ndị ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ ka ndị gụrụ akwụkwọ banyere ndị na - ahụ maka inshọransị banyere igwe eletrik.
Otu echiche sitere n’aka ụfọdụ ndị bịaranụ bụ na Ndị mmadụ maka Buki nwere ike ịnye mkpuchi. Velo guarantee na enye insurance insurance nke igwe.
Alex Logemann, Council Council sitere na Ndị mmadụ maka Bikes, gosipụtara n’akụkọ ihe mere eme, ọnọdụ dị ugbu a, yana ọdịnihu nke tarifụ maka China, Europe na Japan.
Banyere tarifụ ndị China, enwere ụfọdụ nkọwa dị mma maka ụlọ ọrụ mana n'ozuzu ọtụtụ ihe agbanweela dịka nke ọnwa atọ dị na Disemba mgbe emere ngosi ahụ.
Enwere ike ịkwụ ụgwọ maka ụfọdụ sọlfọ na-esite na Europe n'ihi enyemaka EU na Airbus ma n'ikpeazụ, a na-edobe akụkụ nke ịgbazị ego na tarifụ ọ bụla.
Japan na US ruru nkwekọrịta azụmaahịa ọhụrụ n'ọnwa Ọktọba nke kwesịrị ibelata tarifụ na ụfọdụ igwe kwụ otu ebe ihe karịrị afọ 2.
Creatmalite Okike E-Bike na Okike na N’ike
Karen Wiener, Co-nwe nke ụlọ ahịa New Wheel eBike dị na mpaghara San Francisco, gosipụtara echiche ya banyere otu ụlọ ọrụ n'ozuzu nwere ike isi rụọ ọrụ ọnụ iji bulie ahịa igwe kwụ otu ebe na US.
O kwusiri ike na ndị na-ere ahịa mpaghara nwere ozi bara nnukwu uru maka ụlọ ọrụ eBike gbasara ndị na-agba ụgbọ eBike ha na-arụ ọrụ.
Karen ejirila igwe kwụ otu ebe na-ebugharị ụgbọ ala mgbe ọ na-ebugharị obere nwa ya nwanyị Ida. Ọ mụtala ọtụtụ ihe site na njem njem kwa ụbọchị ma gbaa ndị niile na-arụ ọrụ aka ka ha jiri eBikasị dị ka o kwere mee iji bie ndụ eBike n'ezie.
The New Wheel na-elekwasị anya na igwe eletriki dị ka ihe ọzọ maka ụgbọala ma ha na-arụ ọrụ na nkwado obodo maka ihe ndị ọzọ na-emepe emepe igwe na mpaghara San Francisco.
eMTB na-aga n'ihu na-abụ akụkụ eBike na-eto eto ma enwere steeti iri abụọ na atọ ugbu a na-enye ohere eMTB n'ụzọ ụfọdụ enweghị usoro.
Steeti ndị ahụ bụ: Alaska, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Idaho, Kansas, Louisiana, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nevada, New Jersey, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, South Dakota, Utah, Virginia , Wyoming.
Ndị mmadụ maka Bikes nwere maapụ eMTB yana ntuziaka maka njem ndị njem. Ha arụpụtakwala eMTB Trail Etiquette Guide na eMTB Playbook maka ịkwado maka ịnweta eMTB ka mma.
Offọdụ ọrụ dị mkpa bụ inweta ndị na-ahụ maka ala ime obodo ịmatakwu banyere eMTBs. Ndị mmadụ maka Bikes na-atụ aro ka ha na onye njikwa ala maka ịnya ụgbọ ule ka ha wee nwee ike ịghọta ikike nke eMTB maka ịchọpụta ebe enyere ha ikike.
Joe Vadeboncoeur bụ onye bụbu onye nchịkwa Trek na ugbu a onye na-ahụ maka ụlọ ọrụ anyịnya igwe na onye na-akwado ya. O kwenyere na ekwesịrị imekwu ọmụmụ ihe banyere mmetụta eMTB iji nyere ndị na-elekọta ala aka ịme mkpebi na ịnweta.
Ufodi ihe omumu na ajuju ekwesiri ilebara anya n’aka Mr. Vadeboncoeur bu:
Studies Otutu omumu ihe omimi nke ihe omimi eMTB sitere na mpaghara obodo a na udiri ala ozo
● Enwere ike eMTBs na MTBs ọdịnala na ụdị ụzọ niile? Ilsfọdụ ụzọ ọ dị mkpa ịgbanwe?
● Egowo ụzọ ụfọdụ site na ego iji nweta ihe ndị a na-emeghị eme. Kedu ka ikwe ka eMTBs ga-esi rụọ ọrụ?
● Ekwesịrị inwe ọkụ ọkụ na oke ọsọ enyemaka.
Increase Ọ ga-eme ka ndị bara ụba n'okporo ụzọ ndị a ga-eduga n'inwetakwu nlekọta? Ọ bụrụ etu a, olee ebe ego ga-esi bia? Taxtụ ụtụ ahịa ma ọ bụ ego ikikere?
Mgbe ngosi ahụ Maazị Vadeboncoeur nwere ndị otu ndị na-ahụ maka ala, IMBA rep, yana San Diego Mountain Bike Association na-aza ajụjụ ndị ndị na-ege ntị na-aza banyere ọtụtụ isiokwu o wepụtara.
eBike Data na Stats
Ndị otu NPD gosipụtara Retail Trends na E-Bike na US na ozi ọma ahụ bụ na dabere na data hanya igwe kwụ otu ebe dị elu 51% site na afọ gara aga.
eBikes bụkwa nnukwu ihe atụ ma e jiri ya tụnyere ọtụtụ ndị ọzọ na ụlọ ọrụ igwe kwụ otu ebe.
Mbughari site na E-Bike Study
John MacArthur si OTREC & PSU
John MacArthur bụ onye njikwa mmemme na-adigide njem na TREC - Mahadum Portland ma ọ nọ na nnọkọ nkwalite ahụ na-akwalite ọmụmụ e-bike.
'Bọọdụ eletrik (e-anyịnya igwe) bụ ụdị njem njem ọhụụ nke nwere ike ịkwalite arụmọrụ n'usoro ụgbọ njem ma ọ bụrụ na anabatara ya dị ka ndị eji dochie ụgbọ ala. Ndị ọrụ nyocha na Mahadum Tennessee, Knoxville, Portland State University, Mahadum nke Pittsburgh, na Bosch E-Bike Systems enwetala ego site na National Science Foundation iji tụta akparamagwa njem nke ụwa n'ezie wee chọpụta mmetụta nkwado nke nhọrọ ndị ahụ. Anyị na-etolite ikpo okwu nke a na-ebughari ngwa ngwa, nke na-abụghị ndị a na-adịghị ahụ anya, na leverages ịgbakọ akụ nke teknụzụ e-igwe kwụ otu ebe na ikike sensọ smartphone. '
Ọzọkwa 'omume ndị dị ugbu a banyere ịntanetị data e-igwe kwụ otu ebe na-adabere na ncheta na ncheta onwe onye sitere na onye ọrụ ahụ. Uzo anyi gha eji lebara ihe nlere anya ka iji mee ka nnabata data di elu na, iji igwe omumu ihe, meputa data buru ibu na nke kachasi ike iji kwado uto nke ihe eji e-keke eme dika nhọrọ njem.
Ha na-achọ ndị sonyere na-aghaghị iji 'e-igwe kwụ otu ebe gị iji na-aga, na-agba ọsọ ozi, ma ọ bụ gaa na ndị enyi na ezinụlọ' ma nwee ma ọ dịkarịa ala iPhone 10.
Canyon nwere otu igwe eletriki eletrik gosipụtara na ọnụahịa European na ndetu "Ugbu a adịghị na USA"… ..
Nke a bụ ihe nkiri Canyon: Na nkwanye 8.0 zuru ezu na Shimano mid-drive.
Ejiri batrị etiti ọkara Shimano E8000 na batrị agbakwunyere.
The Canyon Roadlite: On 9.0 bụ gravel ịke eBike na taya dịtụ anya-ụzọ style taya.
O nwere usoro mbanye etiti etiti Fazua yana ngalaba mbanye nke enwere ike iwepu ya na batara na moto.